Finfinnee, Waxabajjii 22,2011-Mootummaan federaalaa ajjeechaa – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsFinfinnee, Waxabajjii 22,2011-Mootummaan federaalaa ajjeechaa
Finfinnee, Waxabajjii 22,2011(FBC)- Mootummaan federaalaa ajjeechaa hoggansa olaanoo raayyaa ittisa biyyaa fi siiviiliirratti raawwatameen namoota shakkaman to’achuu eegaluusaa ni dinqisiifanna jedhan itti aanaan preezdaantii naannoo Tigraay Dooktar Dabratsiyoon G/mikaa’eel.
Mootummaan federaalaa ajjeechaa Finfinnee fi Baahir Daaritti raawwatameen walqabatee namoota shakkaman to’achuu eegaluusaa akka dinqisiifatan Dooktar Dabratsiyoon ibsaniiru.
Dooktar Dabratsiyoon kaleessa ibsa gaazexeessummaa laataniin akka beeksisanitti, mootummaan federaalaa shakkamtoota to’achuuf hojii hojjeturratti naannon Tigraay tumsa barbaachisaa kan taasisu ta’uu ibsaniiru.
Ajjeechaa hoggansa olaanoo raayyaa ittisaa fi siiviilii waliin walqabatee qaamolee shakkaman to’annaa jala oolchuu fi qorannaan gaggeeffamaa jiru akka itti fufu gaafataniiru.
Torbee darbe sochiin finxaaleyyiin taasisan hamaa akka ture ibsuun, heera mootummaa diigudhaan taayitaa humnaan qabachuuf kan karoorfatan akka ture itti aanaan preezdaantichaa ibsaniiru.
Dooktar Dabratsiyoon, mootummaan federaalaa yaala Jeneraal Abrahaa Waldamaariyaamif(Kwaartar) tumsi taasise olaanaa akka ture ibsaniiru.
Jeneraal Abrahaan baatii lamaan dura torbee lamaaf Hoospitaala Aaydar Maqaleetti deeggarsa yaalaa hordofaa turaniiru.
Mottummaan federaalaa fi raayyaan ittisaa jeneraalichi yaala isaanii Baankook Taaylaanditti akka hordofan tumsuu isaanii Dooktar Dabratsiyoon beeksisaniiru.
Mootummaan federaalaa Jeneraal Abrahaan yaala isaanii biyya alaatti akka hordofan taasisuun cinaatti, baasii guutuusaa danda’uu ibsaniiru.
Dooktar Dabratsiyoon ibsa laataniin Jeneraal Abrahaan biyya alaatti yaala barbaachisaa akka hordofan muummee ministiraa Dooktar Abiy Ahimadii fi Jeneraal Sa’aaree Makoonnan tumsa olaanaa taasisuu ibsaniiru.
Jeneraal Abrahaan kaleessa kan boqatan yammuu ta’u, reeffa isaanitiif booru Buufata Xiyyaaraa Idil Addunyaa Booleetti simannaan taasifamuun, gara Maqaleetti ni gaggeeffamu.